Alexis Sanchez oo daqiiqadii 90aad bad baadiyey Jose Mourinho iyo Manchester United+Sawiro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Alexis Sanchez oo daqiiqadii 90aad bad baadiyey Jose Mourinho iyo Manchester United+Sawiro
Cayaaryahanka dalka Chile ee Alexis Sanchez ayaa bad baadiyey shaqada Macalinka dalka Portugal iyo Manchester United Jose Mourinho kadib Gool uu dhliyey daqiiqadii 90 aad ee Cayaarta.
Manchester United ayaa qaybta hore ee Cayaarta lagu marsiiyey 2-0 Goolashaas oo ay Newcastle United u kala dhaliyeen Xiddigaha 7 daqiiqo Kenedy iyo 10 daqiiqo Yoshinori Muto waxaana lays lahaa Man united kama soo laaban doonaan Goolashaas oo ahaa kuwo ka nixiyey Jose Mourinho.
Markii dib laysugu soo laabtay qaybta labaad ayaa Manchester United dar dar lasoo gashay Garoonka kadib Canaantii Macalinkooda waxaana Goolka hore ee Neefta ku soo celiyey dhaliyey Cayaaryahan Juan Mata kaas oo ahaa laad Xor ah halka Goolka bareejada uu dhaliyey 76 daqiiqo Anthony Martial balse Goolka Gooalsha oo dhan waxa uu ahaa kii uu daqiiqadii 90 aad dhaliyey Cayaaryahanka badelka ku soo galay ee Alexis Sanchez kaas oo u muuqda mid bad baadiyey shaqada Jose Mourinho.
Waxaa la arkayey qaar ka mid ah Taageerayaasha Manchester united oo wata Sawirada Jose Mourinho kuwaas oo aan dooneyn in shaqada laga cayriyo halka kuwo kalana ay ku orinayeen markasta oo ay kaamiradu qabato.
Manchester United ayaa samaysey soo labasho layaab leh waxaana muuqatay in Cayaartoyda kooxdaas ay isbadaleen qaybta labaad ee Cayaarta waxayna lasoo bexeen dhaq dhaqaaq aan lagu arkin qaybta Hore ee Cayaartii ka dhacday Old Trafford.